राजविराजको राजदेवी मन्दिरः जहाँ भक्तजनको भाकल पुरा हुने जनविश्वास - News Today
श्यामसुन्दर यादव, राजविराज
सप्तरी सदरमुकाम राजविराज वडा नं.–९ मा राजदेवी मन्दिर स्थापित छ । नगरको पूर्वी भागमा भलुवाही नदीको पूर्वी तटमा स्थापित यो मन्दिर अति प्राचीन रहेको छ । करिब ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर पहिला गुम्बज शैलीको भए पनि हाल पैगौडा शैलीको भव्य एवम् आकर्षक मन्दिर बनाइएको छ ।
मन्दिरमा प्रवेश गर्नका लागि पहिला दुईवटा बाटा थिए । अहिले भने पूर्वपट्टीको एक मात्र द्वार रहेको छ । यस मन्दिरमा सामान्यभन्दा लामा, मोटा र चौडा इ“टको प्रयोग भएको पाइएको छ । मन्दिरदेखि उत्तरतर्फ एउटा अर्को गुफा छ । उक्त गुफा भएर मन्दिरसम्म पुग्न सकिने सप्तरीका इतिहासविद् प्रा. हरिकान्तलाल दासको अनुमान रहेको छ ।
मन्दिरको भित्री भाग जमिनको सतहभन्दा मुनि रहेको छ । राजदेवी मन्दिरको सिंहासनमा कलात्मक ढुड्डाका चौकसका टुक्राहरू राखिएका छन् । एउटा ढुड्डामा नारीको मूर्ति कु“दिएको छ ।
उक्त मूर्तिलाई राजदेवी माताको नामबाट पूजा–आजा गरि“दैआएको छ । सिंहासनमा राखिएका अन्य स्तम्भका टुक्राहरूमा विभिन्न चित्रहरू अङ्कित छन् । तत्कालीन समयमा सेनवंशी राजाहरूकी इष्टदेवी राजदेवी हुन् र सेनहरू देवस्थलमा प्रतिमा नभई शिलालाई पुज्ने गरेका थिए भन्ने आधारमा सेनवंशी राजाद्वारा स्थापित यस मन्दिरको नाम राजदेवी रहन गएको हो । (हरिकान्तलाल दास र पीताम्बरलाल यादव, सप्तरी जिल्लाका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको ऐतिहासिक अध्ययन राजदेवी र छिन्नमस्ता लघु अनुसन्धान कार्य २०४१)
सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको स्थापना हुनुपूर्व पनि राजदेवी मन्दिर चर्चित रहेको थियो । सप्तकोशी नदीले पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगरलाई कटान गरेपछि वि.सं. १९९७ सालमा जङ्गल कटान गरी राजविराजमा सहर बसाइएको थियो । वि.सं. १९९८ सालमा हनुमाननगरबाट सम्पूर्ण कार्यालयहरू सारिएको थियो । हालको राजविराजलाई बूढापाकाहरूले नया“ बजार अर्थात लबका बजार नै भन्ने गर्दछन् । यस क्षेत्रमा राजदेवी मन्दिर निक्कै चर्चित रहेकोले सहरको नाम समेत यसै मन्दिरको नामबाट रहन गएको हो ।
मन्दिर अगाडि सात विगहाको विशाल पोखरी रहेको थियो । उक्त पोखरी अहिले खेत तथा बस्तीको रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । करिब सय वर्ष अघि एक कवि फत्तु झा नाम गरेका कविले आफ्नो कवितामा पोखरीको वर्णन यसरी गरेका छन् ः
राजपुर मौजा अन्तर्गत पर्ने यो मन्दिर अगाडि पहिला धेरै पुराना एवम् विशाल रूखहरू रहेको थियो । वि.सं. २०५३ सालमा मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्दा उत्खनन्बाट विभिन्न प्रकारको मुर्तिहरू भेटिएको थियो । सप्तरी जिल्लाका अन्य मन्दिरहरूझैं यस मन्दिरमा समेत पूजारी राख्ने परम्परा रह“दै आएको छ । मन्दिरको रेखदेख तथा पूजा सम्पादन कार्य पडररिया गाउ“का थारू परिवारद्वारा सम्पादन हु“दै आएको छ ।
यस मन्दिरमा भाकल गरेपछि मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रह“दै आएको छ । यहा“ नया“ वर्षको अवसरमा वैशाख १ गते धामीद्वारा पूजा–आजा हुने गर्दछ । सोही दिन भव्य मेला लाग्ने गर्दछ । यो मेलालाई स्थानीय भाषामा सिरूवा मेला भन्ने गरिन्छ । साथै विजयादशमी तथा चैते दशैंमा मन्दिरमा पूजा–आजा गर्न आउने भक्तजनहरूको घुइ“चो लाग्ने गर्दछ । हुन त मन्दिरमा प्रायः हरेक दिन बली प्रदान हुने गर्दछ, यद्यपि बडा दशैं र चैते दशैंको समयमा सयौंको सङ्ख्यामा बली प्रदान हुने गर्दछ । यस मन्दिरमा विवाह, मुण्डन सहितका शुभकार्यहरू समेत हुने गर्दछन् ।
(लेखक यादव ‘न्यूज टुडे’ दैनिक÷अनलाइनका सम्पादक हुन् )
Previous : गठबन्धनका सप्तरी संयोजकसहित स्वराजीहरुको १२ दिनको म्याद थप
Next : बल्ल टुङ्गिने भो राजविराज नगरपालिकाको विवाद